Imincintiswano yezincwadi eSpain ngenyanga ka-Okthoba | Izincwadi Zamanje
Imincintiswano yezincwadi eSpain phakathi nenyanga ka-Okthoba
Ngiyazi ukuthi phakathi kwabafundi bethu kukhona nababhali abaningi, ngakho-ke akulimazi ukukulethela imininingwane ngemincintiswano yezemibhalo nemincintiswano ngezikhathi ezithile. Kulesi sihloko, nginethulela ezinye imincintiswano yezincwadi eSpain ngenyanga ka Okthoba.
Bhala phansi lolu lwazi, amakheli e-imeyili nezinsuku bese ukulandela! Inhlanhla uma ubamba iqhaza futhi uma ungenasikhathi nganoma yisiphi isizathu, ungakhathazeki ngoba ngenyanga ezayo sizoletha okuningi. Nina niyabhala, akukaze kube buhlungu.
1 I International Essay Contest "IBonillo endaweni kaDon Quixote" (Spain)
2 Mina Umklomelo Wezinkondlo waseManuel del Cabral (Spain)
3 Umncintiswano Wezindaba Ezifushane we-XXV "I-Noble villa de Portugalete" (Spain)
I International Essay Contest "IBonillo endaweni kaDon Quixote" (Spain)
Umklomelo: ama-euro angama-1000
Ukuhlela inhlangano: Umkhandlu wedolobha we- «El Bonillo»
Usuku lokuvala: 01/10/2015 (ekuseni)
“Umkhandlu wedolobha i-El Bonillo, umemezela lo mncintiswano wokuqala ngokulandela lezi zisekelo ezilandelayo:
Abalobi: Bonke ababhali bakazwelonke nabakwamanye amazwe abafisayo, futhi abafaka umsebenzi wabo wokuqala futhi ongashicilelwe ongazange unikezwe komunye umncintiswano futhi obhalwe ngolimi lweSpanish, bangabamba iqhaza. Umbhali ngamunye angahambisa umsebenzi owodwa kuphela emncintiswaneni.
Isandiso: Akunamkhawulo kubude bamaphepha, futhi kufanele athunyelwe ngefomethi ye-A4 enezikhala eziphindwe kabili ku-Times New Roman font, usayizi 12.
Isihloko: "IBonillo endaweni kaDon Quixote" (Izahluko XXI-XXII)
Izihloko: Phakathi kukaJanuwari 23 no-Okthoba 1, 2015.
Ikheli Lokuthumela: elbonilloquijote2015.essayos@gmail.comIzindaba ezithunyelwa ngeposi elijwayelekile noma ngefeksi ngeke zamukelwe. Amafayela amabili azothunyelwa nge-imeyili: owokuqala onendaba enesihloko, bese owesibili lapho kufanele kuvele khona igama lomlobi, ukubhala kabusha kombhalo, kanye nenombolo yocingo yokuxhumana (mhlawumbe iselula).
Imiklomelo: Umklomelo wokuqala wama-euro angama-1000; Umklomelo wesibili wama-euro angama-800 nomklomelo wesithathu wama-euro angama-500.
Imiklomelo: Izobanjelwa e-El Bonillo, ngoMgqibelo, Novemba 14, 2015, emcimbini lapho kuzokwaziswa khona igama labaphumelele. Ukwenza inkokhelo yemiklomelo iphumelele, kuzobaluleka ukuthi abawinile babekhona kulo mcimbi ukuze bafunde umsebenzi wabo ngokwenyama uma behlala eNhlonhlweni Yase-Iberia, bakwazi ukukwenza lokho uma beveza ukuhlala kwabo ngaphandle kwawo.
Mina Umklomelo Wezinkondlo waseManuel del Cabral (Spain)
Umklomelo: Ama-euro angama-1000, i-edition nesitatimende
Kuvulekele: izakhamizi zaseSpain ezingaphezu kweminyaka engu-18 ubudala
Ukuhlela inhlangano: IJuan Bosch Cultural Center
Ababhali abahlala eSpain bangabamba iqhaza mdala kuneminyaka engu-18.
Isitayela netimu kukhululekile ngokuphelele.
Umsebenzi kufanele ubhalwe nge Isi-Castilian.
Umbhali ngamunye angabamba iqhaza ngemisebenzi emibili.
Umsebenzi kufanele ube akushicilelwe Kukho konke.
Ukubamba iqhaza kuzokwenziwa ngaphansi kwegama lomgunyathi futhi ukuvalwa okuvaliwe kuzofaka igama lomsebenzi, igama laso, igama langempela lomlobi, ikhophi kamazisi wabo kanye nemininingwane yabo yokuphila.
Umsebenzi kufanele ufakwe ekhompyutheni, uphrintwe kusayizi wefonti u-12 we-Times New Roman futhi kufanele okungenani ube namavesi angama-200. Amakhophi amathathu kanye ne-escrow kumele athunyelwe kokulandelayo isiqondiso: Isikhungo Samasiko kaJuan Bosch, eGran Vía Ramón y Cajal, N ° 5 (Bajo), 46007 Valencia, Valencia (Spain).
Ukutholwa kwamakhophi kuphelelwa yisikhathi ngo-Okthoba 1, 2015.
Ozophumelela emncintiswaneni uzothola umklomelo wama-euro awu-1000, ukushicilelwa kwencwadi nguHuerga y Fierro Editores kanye nesifanekiso.
Isinqumo sejaji sizoba sokugcina.
Isinqumo sizomenyezelwa ngomhlaka-20 Novemba 2015 kanti umcimbi wokuklonyeliswa kwabadlali uzoba ngoLwesihlanu, Novemba 28 wangonyaka ofanayo.
Umncintiswano Wezindaba Ezifushane we-XXV "I-Noble villa de Portugalete" (Spain)
Umklomelo: € 1.500
Kuvulekele: phakathi kweminyaka eyi-14 nengama-29 ubudala
Inhlangano ehlelayo: Umkhandlu Wedolobha lasePortugalete
Usuku lokuvala: 13/10/2015
Abahlanganyeli: Bonke ababhali abafisayo nabaneminyaka yobudala ephakathi kuka-14 no-29 ubudala bangabamba iqhaza kulo mncintiswano, ngezigaba ezimbili: 1. Isigaba A. Ababhali beminyaka esemthethweni: kusuka eminyakeni eyi-18 kuye kwengama-29 ubudala.
2. Isigaba B. Ababhali abancane: kusuka eminyakeni eyi-14 kuye kweyi-17.
Imisebenzi ingavezwa nganoma yiziphi izilimi ezimbili ezisemthethweni zoMphakathi Ozibusayo Wezwe laseBasque: Basque neSpanishi. Isihloko sizoba mahhala futhi imisebenzi kufanele ibe ngeyangempela, ingashicilelwa (kufaka phakathi imidiya ye-elekthronikhi) futhi inganikezwa kweminye imincintiswano. Lesi simo sokugcina kufanele sivunyelwe ngesitatimende esifungelwe esivela kumbhali, uma umsebenzi ukhishwa kulo mncintiswano.
Isethulo somsebenzi: Kungaba ku ifomethi yephepha. Ngalokhu, kufanele zithunyelwe ziphindwe kathathu, kwimvilophu evaliwe, ngaphandle kokuhlonza umbhali nangaphansi kwesihloko, naso, okufanele sivele phezulu kwawo wonke amakhasi. Kanye nesihloko, kuzokhonjiswa nokuthi ubamba iqhaza kuliphi isigaba. Ngaphakathi, kuzonamathiselwa enye imvilophu enesihloko esifanayo nedatha yomuntu siqu yombhali: igama, isibongo, inombolo yocingo, ubungcweti, iminyaka, ikheli eligcwele nekhophi kamazisi noma ipasipoti. Kufanele zithunyelwe ku:
UMKHANDLU WEDOLOBHA LABASEKHAYA. INDAWO YEMFUNDO NENTSHA
Umncintiswano Wezindaba Ezifushane we-XXV
IPlaza del Solar, s / n
Kungaba futhi ku- ifomethi yekhompyutha. Ngalokhu, umsebenzi kufanele wethulwe kufayela elinesandiso se-. Kanye nesihloko, kuzokhonjiswa nokuthi ubamba iqhaza kuliphi isigaba. Lo mbhalo uzophelezelwa elinye ifayili, elihambisana nesandiso se-. Kufanele uyithumele ku: educacion@portugalete.org
Isandiso: Ukunwetshwa komsebenzi kungeqi emashidini kasayizi we-DIN-A4 ayishumi nanhlanu, abhalwe ohlangothini olulodwa, kukhompyutha, anezikhala zomugqa eziyi-1,5. Ifonti izoba iphuzu le-Times New Roman 12. Wonke amakhasi azofakwa izinombolo ngokufanele.
- Umklomelo wokuqala: € 1.000.
- Umklomelo wesibili: € 600.
- Umklomelo wesibili endabeni ehamba phambili ngolimi olungakhishwa: € 250.
- Umklomelo wokuqala: € 600.
- Umklomelo wesibili: € 300.
- Umklomelo wesibili endabeni ehamba phambili ngolimi olungakhishwa: € 100.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Imincintiswano yezincwadi eSpain phakathi nenyanga ka-Okthoba
UJUAN HEREDIA FERNÁNDEZ kusho
Ozithobayo. Chofoza kusixhumanisi bese ufaka umhlaba wokubhala wombhali waseLatin American okwamanje uHELIOS MAR owethula umsebenzi wakhe wakamuva osihloko sithi ROMANCE.
"Kuyohlala kunokukholwa nethemba enhliziyweni yami engazinzile ukukwazi nokwazi ukuthi uzoba khona ungilindile ukuze ngikwenze owami." Helios Mar
Phendula kuJUAN HEREDIA FERNÁNDEZ
Ubuciko bokufunda kahle
Abaphumelele Imiklomelo KaHarvey Ka-2015